Burgundy Red နှင့် Sunrise Gold တို့တွင် Samsung က Galaxy S9 နှင့် S9 Plus ကိုပွဲထုတ်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
Burgundy Red နှင့် Sunrise Gold ရှိ Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 Plus တို့ကိုပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Jordi Gimenez | | မိုဘိုင်း
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော Samsung Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 Plus တို့အားအရောင်သစ်နှစ်မျိုးကိုပြသခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်အနီရောင် (maroon color ဖြစ်နိုင်သည်) Burgundy Red နှင့်ရွှေတစ်လုံး၊ Sunrise Gold ဖြစ်သည်။
Mobile World Congress 2018 ၏မူဘောင်တွင်ကုမ္ပဏီမှတင်ပြပြီးသောဤအရောင်များကိုအရောင်များ - အနက်ရောင်, တိုက်တေနီယမ်မီးခိုးရောင်, သန္တာအပြာနှင့်ခရမ်းရောင်။ ဤအရောင်သစ်များသည်ရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်ရန်ကောင်းမွန်သောမက်လုံးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီးအရောင်များပိုမိုရလေလေပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစပါးကျီ (Burgundy နီ) ကန့်သတ်ထုတ်ဝေသည်
အရောင်နှစ်မျိုးလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိတောင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင်သာအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ရွှေရောင်အရောင်သည်ကျန်နိုင်ငံများနှင့်အရာရာတိုင်းအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ပုံရသည် တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ စပိန်၊ မက္ကဆီကိုနှင့်ချီလီတို့တွင်မေလအတွက်စတင်မိတ်ဆက်သည်.
အရောင်နှစ်မျိုးလုံးကို Samsung မှ၎င်း၏စာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအရစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီမော်ဒယ်နှစ်မျိုးဟာအရင်မော်ဒယ်တွေနဲ့တူညီတဲ့လက္ခဏာတွေရှိပြီးတကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရောင်အပြင်မှာအပြောင်းအလဲတွေကိုမပေးနိုင်ပါဘူး။ ဤမော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုးသည်ယခုလမှ စတင်၍ စတင်ရောင်းချလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသော်လည်းရောင်းအားစတင်မည့်နေ့ရက်အတိအကျမရှိသေးပါ။ မူအရမူရင်းဈေးနှုန်းသည်ယခင်ကထုတ်ပေးခဲ့သောအရောင်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Burgundy Red နှင့် Sunrise Gold ရှိ Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 Plus တို့ကိုပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Linksys သည် Velop WiFi Dual-Band၊ Leverages Intelligent Mesh Technology ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်